Madaxweynaha Somaliland iyo waftigiisa oo waxba kama jiraan ku tilmaamal inay la kulmayaa Madaxweynaha Somalia | Salaan Media
Home Wararka Madaxweynaha Somaliland iyo waftigiisa oo waxba kama jiraan ku tilmaamal inay la...
Madaxweynaha Somaliland iyo waftigiisa oo waxba kama jiraan ku tilmaamal inay la kulmayaa Madaxweynaha Somalia
Weftigii Madaxweynaha Somaliland Oo Beeniyay Inay La Kulmayaan Madaxweynaha Soomaaliya
“Wararka sheegaya inaanu Imaaraadka u nimid inaanu is aragno Madaxweynaha Soomaaliya waa mid aan jirin oo aan sal lahayn”
“Booqashadii rasmiga ahayd ee aanu Imaaraadka u nimid way noo dhammaatay, Arbacadana Dalkii ayaanu Tagaynaa”
“Somaliland & Soomaaliya waxay u baahan yihiin shirar kan ka duwan oo beesha caalamkuna ay Taageero ku yeelato”
Dubia (SM)- Xukuumadda Somaliland ayaa meesha ka saartay warar sheegayay in Madaxweyneyaasha Somaliland Iyo Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Xasan Sh. Maxamuud ay ku yeelan doonaan kulan dalka Imaaraadka carabta.
Wasiirka Arrimaha dibada iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ka mid ah xubnaha weftiga madaxweyne Siilaanyo ee socdaalka ku jooga Imaaraadka carabta ayaa sheegay in hadafkii ay ka lahaayeen socdaalkooda ay dhamaysteen, isla markaana ay maalinta Arbacada ku noqonayaan Somaliland.
“Sababta aanu dalka Imaaraadka carabta u nimid waxay ka dambeysay marti-qaad aanu ka helnay Hoggaanka sare ee dalka Imaaraadka,”ayuu yidhi Wasiirka oo maanta u waramayay laanta Afsoomaaliga ee BBC-da.
Dr. Maxamed Cabdilaahi oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaana intii aanu halkan joognay kulamo la yeelanay qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareeya Imaaraadka carabta oo ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Binu Saa’id Al-Nahyaan iyo Sheekh Mansuur Binu Saa’id AL-nahyaan, waxaanu ka wada hadalnay cilaaqaadka labada dal iyo mashaariic u badan xaga horumarka oo aanu ka codsanay dawlada Imaaraadka carabta.”
Wasiirka oo la weydiiyay su’aal la xidhiidhay waxa jira warar sheegayay in lagu wado in Madaxweyneyaasha Somaliland Iyo Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan dalka Imaaraadka carabta, waxaanu ku jawaabay “Sidaan hore u sheegay waxaanu halkan u nimid inaanu ka hadalno arrimo u badan xagga horumarka, sida dhaqaalaha, caafimaadka, Tacliinta iyo xagga wadooyinkaba. Balan aanu xagan (Imaaraadka) ku lahayn Madaxweynaha Soomaaliya ma jirto. Shir labada madaxweyne ay dalkan ku balansanaayeena ma jro.”
“Markaa wararka sheegaya inaanu Imaaraadka u nimid inaanu is aragno Madaxweynaha Soomaaliya waa warar aan jirin oo aan sal lahayn,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi.
Wasiirka Arrimaha dibada oo la weydiiyay waxay ka yeelanayaan haddii marka Madaxweynaha Soomaaliya ka soo noqdo Qatar ay suurto-gal tahay in labada madaxweyne Is arkaan, waxa uu yidhi “Booqashadii rasmiga ahayd ee aanu Imaaraadka u nimi way noo dhammaatay. Madaxdii ugu saraysay dalkana waanu kulanay si wanaagsanna way noo soo dhaweeyeen. Muraadkii aanu socdaalkan ka lahayna waanu ka dhamaysanay Berina waxaanu ku noqonaynaa Somaliland isagoo aan madaxweynaha Soomaaliya aan imanba.”
Dr. Maxamed Cabdilaahi oo la weydiiyay halka ay ku dambeeyeen wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya, waxa uu yidhi “Wada hadaladii loogu baaqay inay dhex maraan Somaliland iyo Soomaaliya hore ayay u bilaabmeen dawladii Sh. Shariif madaxda ka ahaa, intii dawladan cusubi ay jirtay nasiib darro wali may suurto-gelin.
Waayo dawlada cusub ee Soomaaliya waxay ku mashquulsanayd arrimo badan oo xasaasi ah oo iyaga u gaar ah nabad-gelyadu u badan tahay.”
“Annaguse (Somaliland) dhawr jeer baanu ku celinay, diyaarna waanu u nahay. Waxaanan kuu sheegayaa imika inay socdaan qorsheyaal lagu damacsan yahay in wada-hadaladii mar labaad si wanaagsan dib ugu bilowdaan. Diyaarna waanu u nahay,”ayuu yidhi Wasiirka Khaarajiga Somaliland.
Dr. Maxamed waxa kale oo la weydiiyay inuu tafaasiil ka bixiyo mowqifka kama dambaysta ah ee Somaliland ka taagan tahay shirka lagu wado in London lagu qabto Bisha May ee sanadkan, waxaanu yidhi “Arrintaasi Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland ayaa si wanaagsan uga hadlay. Waxaanu u aragnay in shirkani inuu yahay mid khaas u ah umuuraha dawlada cusub ee Muqdisho oo uu waliba xaga Nabad-gelyada u badan yahay. Guulna waanu u rajaynaynaa.
Waxase aanu jecel nahay in labada dawladood is arkaan oo ay bilaabmaan wada hadaladii lagu baaqay sanadkii hore. Shirkan waxa loo qabanayaa in Soomaaliya taageero xaga nabad-gelyada ah la siiyo. Laakiin Somaliland iyo Soomaaliya waxay u baahan yihiin shirar kan ka duwan oo beesha caalamkuna ay ka qeyb-gal iyo taageeraba ku yeelato.”